Madaxda dowladda oo umaadda Soomaaliyeed leh “Ciid Wanaagsan” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxda dowladda oo umaadda Soomaaliyeed leh “Ciid Wanaagsan”
Mareeg.com: Maanta waxaa dalka Soomaaliya oo dhan laga dukanayaa salaadda Ciidul-firdirga, iyadoo xalay bisha Shawaal laga arkay meelo badan oo ka mid ah dalka.
Haddaba m,adaxda dowladda Soomaaliya ayaa Umadda Soomaaliyeed ugu hambalyeey munaasabadda ciidul-firdriga.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Shiikh Maxamuud ayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan u direy hambalyada ciidul fitriga oo maanta loo dabaaldegayo.
Madaxweynuhu wuxuu yiri “Ii oggolaada in aan idinla wadaago farxadda ciidda. Ilaaheey waxaan ka baryayaa in uu soonkii aan soonnay naga siiyo ajar iyo xasanaad. Shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa in ay gacmaha isqabsadaan oo ay si wadajir ah u wada ciidaan, una kaalmeeyaan wallaalahooda aan wax heysan, gaar ahaan qoysaska ay cunta yarida iyo macluushu ay soo food saartay”.
Madaxweynahu waxuu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay ka wada shaqeeyaan nabadda, iyo dib-u-heshiinta, si dalku uu u noqdo mid horumar ballaaran sameeya. Farxadda Ciidduna waa mid nooga baahan inaan isu naxariisano, danteenna guudna ka wada shaqeyno.
Hore ayuu abwaan Soomaaliyeed u yiri “Allah maanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan, Illaahii ina siiyey isagaa ku abaal leh”.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdiwali Shiikh Axmed Maxamed ayaa shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan shucuubka Islaamka ugu hanbalyeeyey munaasabadda Ciidul Fidriga.
Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa u rajeeyey dadka Soomaaliyeed in ay ciiddan Cideeda ku gaaraan nabad iyo horumar , isla-markaasina ay ka adkaadaan cadawgooda ka hortaagan nabadda iyo dowladnimada.
Ra’iisul Wasaare Cabdiweli ayaa sheegay in Cidda Fidrigu tahay munaasabad sannad leh oo dadka Muslimiintu ku soo afmeeraan bisha barakaysan ee Ramadan, iyagoo farxad iyo damaashaad ku sagootinaya bishaasi.
Mudane Cabdiweli ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed in faraxadda Ciiddul Fidriga awgeed ay is gargaaraan, kana wada qayb-galaan wixii wanaag u ah ummadda iyo waddanka, iyagoo ka fogaanaya wax kasta oo dhaawacaya dalka iyo nabaddiisa.
Isagoo ka hadlayey hanbalyada Ciidda, Mudane Cabdiweli waxa uu yiri:
“ Hanbalyo, waxaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ugu hanbalyeynayaa munaasabaddan Ciiddul Fitriga, waxaan idiin rajaynayaa inaad nabad iyo farxdad ku ciiddaan. Waxaan ka soo baxnay bil barakaysan oo cibaado, inagoo ku soo khatimayna munaasabaddan farxadda leh.
“ Waxaan shacabka Soomaaliyeed leeyahay ciiddan ciideeda ku gaara nabad, horumar iyo barwaaqo. Waxaan muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ugu baaqayaa inay is gacan qabtaan oo is taakuleeyaan.
“ Munaasibaddan ciiddu waxay ku soo beegantay iyadoo waddanku marayo xilli adag oo dhinaca ammaanka ah, waxaan tacsi u dirayaa dhammaan dadkii ku dhintay xilligii la soo dhaafay iyagoo gudanaya waajib qaran. Dowladdu waxay waddaa qorshe dhamaystiran oo lagu sugayo ammaanka qaranka.
Dhinaca kale, Guddoomiyaha Barlamaanka Federaalka Soomaaliyeed, Mudane Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari), ayaa Ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyey munaasibadda ciidda barakeysan ee ciiddul Fidri, waxa uuna ugu duceeyey shacabka Soomaaliyeed in ay gaaraan himilooyinkooda, nabadda, horumarka, iyo midnimada.
Somali govt decide to shut down their embassies in West Africa